राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् च्याम्पियनसिप - खेलकुद - साप्ताहिक
विभागीय टोलीको वर्चस्व
नेपाली राष्ट्रिय खेलकुदमा विभागीय टिमको वर्चस्व नयाँ होइन, न त यो अनपेक्षित नै हो । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) च्याम्पियनसिपमा यो तथ्य फेरि एकपटक प्रमाणित भएको छ । पछिल्लो साता तीन/चार खेलका राष्ट्रिय प्रतियोगिता टुंगिए र लगभग सबैमा विभागीय टिमकै वर्चस्व रह्यो । जस्तो, तेक्वान्दो र ब्याडमिन्टनमा नेपाली सेनाको टिम हावी भयो । हकीमा पनि सेना नै छायो भने पुरुष फुटबलमा भने नेपाल प्रहरी ।
पूरा राखेप च्याम्पियनसिपलाई आधार मान्ने हो भने यो सूची अझ लामो हुनसक्छ । यस्तोमा प्रश्न उठ्छ, के यो नेपाली खेलकुदका लागि राम्रो हो त ? एउटा तथ्य के निश्चित छ भने अहिले नेपाली खेलकुद जिउँदो र जीवन्त रहन सक्नुको प्रमुख कारण नै विभागीय टिम हुन् । उनीहरूबिना अहिले नेपाली खेलकुदको कुनै पनि प्रतियोगिताको कल्पनासम्म गर्न सकिँदैन । नेपालमा जति पनि राम्रा खेलाडी छन्, उनीहरूमध्ये प्राय:को लक्ष्य विभागीय टिमसँग आबद्ध हुनु नै हुन्छ । यस्तोमा निश्चित छ, नेपाली खेलकुद थामेकै विभागीय टिमले हो । विभागीय टिमकै कारण खेलाडीहरूले रोजगारीसमेत पाएका छन् ।
विभागीय टिमले खेलाडीलाई दिने रोजगारी स्थायी प्रकृतिको छ । त्यसैले खेलाडी त्यसतर्फ आकर्षित हुनु स्वभाविक पनि छ, तर नेपाली खेलकुदमा विभागीय टिमको वर्चस्वले नकारात्मक पक्षलाई समेत उजागर गरेको छ । विभागीय टिमकै कारण नेपाली खेलकुदबाट निजी क्षेत्रको सहभागिता टाढिँदै गएको छ । यसले एकातर्फ विभागीय टिम र निजी क्षेत्रको टिमको स्तरमा ठूलो खाडल देखिएको छ ।
त्यही अन्तरले खेलकुदबाट निजी क्षेत्र हराउँदै जाने स्थितिसमेत उत्पन्न भएको छ । यसमा गम्भीर ध्यान जानुपर्ने भनेको नेपाली खेलकुदको सर्वोच्च निकाय राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्कै हो । एकातर्फ विभागीय टिमको योगदानलाई बिर्सनु पनि हुँदैन भने अर्कातर्फ यिनै विभागीय टिमको वर्चस्वले भित्रिएको समस्याबाट पनि नेपाली खेलकुद मुक्त हुनुपर्छ । सम्भवत: बीचको बाटो ठीक हो कि ? राखेपले नेपाली खेलकुदमा निजी क्षेत्रको सहभागिता र राम्रो प्रदर्शनको सम्भावनालाई पनि खुल्ला राख्न सक्नुपर्छ ।
अहिलेको समयमा उसु नेपालकै लोकप्रिय खेलमध्ये एक हो । दक्षिण एसियाली स्तरमा नेपाललाई सर्वाधिक सफलता दिलाउने यो खेलको तेह्रौं राष्ट्रिय प्रतियोगिता गत सोमबार सम्पन्न भएको छ । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् च्याम्पियनसिपअन्तर्गत इटहरीमा सञ्चालित यो प्रतियोगितामा नेपाल आर्मीले १५ स्वर्ण, ३ रजत तथा ७ कास्य पदक जित्दै टिम च्याम्पियनसिपको ट्रफी जितेको छ । उक्त प्रतियोगितामा सशस्त्र प्रहरीको टिमले ८ स्वर्ण, ३ रजत तथा १ कांस्य पदक एवं नेपाल प्रहरीको टिमले १ स्वर्ण ४ रजत तथा २ कास्य पदकसहित दोस्रो र तेस्रो स्थान प्राप्त गरेका थिए । विभागीय टिमको वर्चस्व रहेको यो खेलमा मध्यमाञ्चलले १ स्वर्ण, २ रजत तथा ९ कांस्य जितेर अन्य टिमको इज्जत धानेको थियो ।
राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् च्याम्पियनसिपअन्र्तगत आयोजना गरिएको १० औं राष्ट्रिय सफ्ट टेनिस प्रतियोगितामा पूर्वाञ्चलले वर्चस्व कायम गरेको छ । पूर्वाञ्चलका युकेश योञ्जनले डिफेन्डिङ च्याम्पियन मध्यमाञ्चलका प्रदीप खत्रीलाई पराजित गरी एकलतर्फ स्वर्ण पदक जिते । योञ्जनले मिक्स पुरुष डबल्सतर्फ आशिष बोहोरासँग मिलेर मध्यमाञ्चलकै प्रदीप खत्री तथा बृजेश खत्रीको जोडीलाई पराजित गरी स्वर्ण पदक जिते । योञ्जनले प्रतियोगिताको तेस्रो स्वर्णका रूपमा आफ्नो टिमलाई टिम इभेन्टतर्फ पनि स्वर्ण पदक दिलाए । यसैगरी प्रतियोगिताको महिला एकलतर्फ मध्यमाञ्चलकी मेघा श्रेष्ठ, महिला डबल्सतर्फ मध्यमाञ्चलकै चन्द्रमाया राई तथा एलिजा रञ्जितको जोडीले स्वर्ण पदक जित्यो भने टिम इभेन्टतर्फ पनि मध्यमाञ्चलले नै स्वर्ण जितेर महिला सफ्ट टेनिसमा आफ्नो वर्चस्व कायम गर्‍यो ।
कुनै समय थियो, नेपालमा हकी लोकप्रिय खेल मानिन्थ्यो । अहिले त्यो इतिहास भैसकेको छ र यो खेलको अस्तित्व अहिले यस कारण मात्र छ कि त्यसमा विभागीय टिमको संलग्नता छ । त्यसैले त राष्ट्रिय हकी प्रतियोगिताको पुरुष र महिला दुवैतर्फ आर्मी टिम च्याम्पियन भएको छ । पुरुषतर्फ आर्मीले सुदूरपश्चिमलाई २–१ तथा महिलातर्फ मध्यमाञ्चललाई ४–० गोलले हरायो । प्रतियोगितामा पूर्वाञ्चलका मनोज चौधरी तथा आर्मीकी सीतामाया बल उत्कृष्ट खेलाडी घोषित भए ।
नेपाली घरेलु फुटबलमा नेपाली प्रहरी टिम केही सेलाएको छ । केही वर्षअघिसम्म नेपाल प्रहरी टिम राम्रा र स्तरीय खेलाडीले भरिएको हुन्थ्यो । धेरै हदसम्म नेपाल प्रहरीमा पुरुष फुटबल सेलाएको छ, तर त्यसलाई नेपाल प्रहरी टिमले २८ औं पुरुष राष्ट्रिय फुटबलको उपाधि जितेर केही हदसम्म गलत सावित गर्ने काम गर्‍यो । फाइनलमा नेपाल प्रहरीले आर्मीलाई टाइब्रेकरमा ५–४ ले पराजित गरेको थियो । तेस्रो स्थानमा पनि अर्को विभागीय टिम एपीएफ नै रहन सफल भयो ।
तेक्वान्दोमा आर्मीले टिम बनाएको धेरै भएको छैन, तर जति बेलादेखि टिम बन्यो, त्यति बेलादेखि नै यसले नेपाली तेक्वान्दोमा आप््mनो गाढा प्रभाव छाड्दै आएको छ । यसपटक राखेप च्याम्पियनसिपअन्तर्गत १४ औं राष्ट्रिय तेक्वान्दोमा यस्तै भयो र आर्मीले जित्यो, ९ स्वर्ण । आर्मीको यो सफलताका पछाडि प्रमुख कारण मानिएकी छिन्, प्रशिक्षक संगीना वैद्य । उनकै सक्रियतामा आर्मीको तेक्वान्दो टिम अब्बल सावित भएको छ ।
आर्मीले गेरोगीमा ७ स्वर्ण, ५ रजत र ३ कांस्य तथा पुम्सेमा २ स्वर्ण, २ रजत र १ कांस्य जित्यो । नेपाल प्रहरी गेरोगीमा ६ स्वर्ण, ४ रजत र ३ कांस्य तथा पुम्सेमा २ स्वर्ण, १ रजत र २ कांस्य जित्दै दोस्रो भयो । एपीएफ तेस्रो भयो र उसले गेरोगीमा २ स्वर्ण, ३ रजत र ३ कांस्य तथा पुम्सेमा १ स्वर्ण र २ कांस्य जितेको थियो । गेरोगी र पुम्सेमा मध्यमाञ्चल र पूर्वाञ्चलका खेलाडीले १–१ स्वर्ण जिते । पुरुषमा नेपाल प्रहरीका वीरबहादुर महरा र महिलामा एपीएफकी अस्मिता खड्का उत्कृष्ट खेलाडी घोषित भए ।
ब्याडमिन्टनमा पनि आर्मीकै खेलाडीको वर्चस्व रह्यो र यो वर्चस्वलाई हेर्ने अर्को नजर पनि छ र त्यो हो – एउटै परिवारको वर्चस्व । आर्मीले उपलब्ध सातमध्ये छ स्पर्धामा स्वर्ण पदक जित्यो । पुरुष टिमको स्पर्धा मात्र एपीएफको नाममा रह्यो । पुरुष एकलको उपाधि रत्नजित तामाङले जिते भने महिला एकलको उपाधि नङ्सलादेवी तामाङले जितिन् अनि मिक्स डबल्समा अपेक्षाअनुसार यिनै भाइ रत्नजित र दिदी नङ्सलाले बाजी मारे ।